काठमाडौँमा आज राती १२ बजेदेखि लकडाउन ! - jagritikhabar.com
काठमाडौँमा आज राती १२ बजेदेखि लकडाउन !
काठमाडौं उपत्यकामा आजराती १२ बजेदेखि लागु हुने गरी स्माट ‘स्मार्ट लकडाउन’ भएको छ ।
कोरोना संक्रमण बढेसँगै स्थानीय प्रशासनले लकडाउनको घोषणा गरेको हो । मंगलबार उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
ललितपुरका सीडीओ घनश्याम उपाध्यायले सीसीएमसी र गृह मन्त्रालयको सर्कुलर अनुसार आर्थिक गतिविधि र आवागमन नरोक्ने गरी स्मार्ट लकडाउन कार्यविधिअनुसार आदेश जारी गरिएको बताए ।
यस्तै भीडभाड तथा राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाउने, सार्वजनिक ठाउँमा २५ जना भन्दा बढी9भेला हुन रोक लगाउने, सार्वजनिक स्थलमा जाँदा माघ ७ देखि खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने, माघ १५ सम्म विद्यालय गर्नेलगायत निर्णय भएको छ ।
यही निर्णयलाई ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि लागू गरेका छन् ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमणविरुद्धको खोप नलगाउनेहरुमा यसको जोखिम बढी हुने चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
अहिलेसम्मको अध्ययनले खोप लगाएको तर ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमित भएका व्यक्तिमा जटिल समस्या अत्यन्त कम देखिएको छ भने खोप नलगाएको व्यक्तिमा यसको जोखिम बढी हुने उहाँले बताउनुभयो । चिकित्सक अधिकारीले भन्नुभयो, “कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन समुदायमा छिटोछिटो फैलिएको छ ।”
२४ नोभेम्बरमा दक्षिण अफ्रिकाबाट पत्ता लागेको कोभिडको तेस्रो म्युटेसन भेरियन्ट ओमिक्रोन भएको भन्दै उहाँले कुनै पनि भाइरस स्वरुपपरिवर्तन अथवा म्युटेसन हँुदा यो बढी गम्भीर भएर जानसक्छ अथवा सामान्य भाइरस बनेर हराएर जान पनि सक्छ भन्नुभयो । कोभिडमा भएका अहिलेसम्मका म्युटेसन हेर्दा तुरुन्त हराउने प्रकृतिको नभइ स्थिर पान्डेमिकको रुपमा बदलिइरहेर दुःख दिइरहन सक्ने देखिएको उहाँको भनाइ छ ।